नायिका श्वेताको उजुरीपछी काजी गुरुङ प,क्रा,उ ! गरेछन गर्नै नहुने यस्तो काम, ८६ लाख तिर्नुपर्ने – Taja Khawar
नायिका श्वेताको उजुरीपछी काजी गुरुङ प,क्रा,उ ! गरेछन गर्नै नहुने यस्तो काम, ८६ लाख तिर्नुपर्ने
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०९, २०७८ समय: १२:३८:२२
काठमाण्डाै । नायिका श्वेता खड्कासँग पैसा लिएर फिर्ता नगर्ने एक व्यवसायी प,क्रा,उ परेका छन। प्रहरीका अनुसार नायिका खड्कासँग ८६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने जग्गा कारोबारी चितवनका काजी गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
श्वेताको उजुरीसँगै काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले गुरुङलाई प,क्रा,उ गरेको छ। एक हप्ताअघि प,क्रा,उ गरेर उनीमाथि अनुसन्धान लिइएको छ
नारीले अवसरको पाए जेसुकै गर्न सक्ने तर्क गर्छिन् । ‘एउटा नारी नभएको घर र नारी भएको घर हेर्नुस्, थाहा भइहाल्छ की नारी कति सिन्सीयर हुन्छन् भन्ने’, श्वेता बोल्ड बोल्छिन्
Last Updated on: September 25th, 2021 at 12:38 pm